Informationen zu: Kinder- und Jugendarbeit
Du bist hier: Startseite / Kinder- und Jugendarbeit
Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir. Jirkayga guud ahaan wuu isbedelayaa. Midaasi ma tahay mid caadi ah?
Adigu waad wel-welsantahay sababtoo ah jirkaaga ayaa isbedelaaya.
Laakiin midaasi gebi ahaanba waa wax caadi ah.
Jirka dhammaan gabdhaha iyo wiilasha wuu isbedelayaa intiiba ay korayaan.
Waa kuwaan waxa dhici doona guud ahaan sannadaha soo socda:
Hadda adiga jirkaaga wuxuu soo saarayaa hormoono galmo.
Hormoonadu waxay siiyaan jirkaaga macluumaad cusub.
Waxay u sheegaan jirkaaga waxa u baahan in la bedelo.
Isbedelka waqtigaan dhacayo waxaa lagu magacaabaa “baaluqnimo”.
Timo ayaa kasoo baxaya gacanta hoosteeda iyo meesha uu kasoo baxo shuunka.
Waxaad u dhididaysaa si joogto ah.
Waxaa wejigaaga iyo dhabarkaaga kasoo bixi kara finan.
Timahaagu waxay noqonayaan kuwo saliid leh waana in la dhaqaa inbaddan.
Waxaa kugu dhacaysa caadadaada.
Naasahaagu waxay bilaabayaan in ay weynaadaan.
Ibta naasahaagu waxay noqonaysaa mid weyn oona madoow ah.
Hormoonooyinkan waxay sidoo kale kaa dhigayaan in aad dareentid dareemo aad u xoogan.
Mararka qaar aad ayaad u murgaysaa, mararka qaarna waxaad dareemaysaa carro aan caadi ahayn mararka qaarna waxaad noqonaysaa qof aad u faraxsan.
Intaan oo dhan waa qayb kamid ah baaluqnimada.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2016-12-23 07:27:122016-12-23 07:27:12Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir. Jirkayga guud ahaan wuu isbedelayaa. Midaasi ma tahay mid caadi ah?